Cabdi Xaashi oo War Culus Maanta kasoo saaray Jadwalkii Doorashado ee la… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi C/llaahi iyo siyaasyiinta kasoo jeeda Gobollada Waqooyi ayaa ka hor yimid jadwalka Doorashada Aqalka Sare ee ay doonayaan inay qabtaan Guddiyada lagu muransan yahay ee Doorashada.
War-saxaafadeed ka soo baxay Cabdi Xaashi ayuu ku sheegay in Guddiyada dowladdu ku magacawday wadatashi la’aanta ee u badan shaqaalaha dowladda, ciidanka, la taliyeyaasha iyo taageerayaasha aanay wax sharciyad ah heysan inay qabtaan doorashada Xildhibaannada ka soo jeeda Somaliland.
Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa tilmaamay in cidda kaliya ee awood u leh inay qabto doorashada Xildhibaanada Somaliland ay tahay guddiga doorashada oo ku yimid wadatashiga ee uu magacaabay Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Maamul goboleedyada iyo Musharaxiinta xilka Madaxweynaha ee 2021, bulshada rayidka iyo beesha caalamka ayaa loogu baaqay in la joojiyo qabashada doorasho aan guddiyadeeda iyo habraacyadeeda heshiis lagu aheyn, isla markaana aan si siman dalka uga qabsoomeyn.
Hoos ka Akhriso Qoraalka uu soo saaray Cabdi Xaashi.